ताजा समाचार – Page 69 – सप्तरंगी एफ एम
Home / ताजा समाचार (page 69)
राप्रपा प्रदेश १ को समिति बिस्तार
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन १/ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रदेश नम्बर १ को समितिलाई बिस्तार गरिएको छ । पार्टिको बिधान अनुसार २७ सदस्यीय हुने प्रदेश समितिमा हाल १२ जना थपेर १३ सदस्यीय बनाईएको राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष राम थापाले जानकारी दिनुभयो । बिस्तारित समितिमा प्रदेश समितिको तिनजना उपाध्यक्षमा प्रल्हाद कुमार साह, लीलादेवी श्रेष्ठ र तेज कुमार कुरुङ्गवाङ्ग, सचिवमा बासुदेव भट्टराई, प्रवक्ता केदार कोईराला, ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/असार ३२/ झापाको गौरादह नगरपालिकामा आज महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवश मनाईएको । हरेक बर्षको मंशिर २० गते मनाउनु पर्ने स्वायंसेविका दिवस यस अर्थिक बर्षको मंशिरमा प्रदेश र संघिय निर्वाचनको समय परेकोले गौरादहमा गर्न सकिएका थिएन । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत आज नगरभित्रका १० जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई दोसल्ला ओडाई उपहार सहित सम्मान गरिएको छ । सम्मानित हुनेहरुमा लेखमाया श्रेष्ठ, ...
दमक जेसिजको अगुवाईमा दमकमा सुबिधा सम्पन्न तालिमहल निर्माण हुँदै
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक /असार ३२/ दमकमा सुबिधा सम्पन्न तालिमहल बन्ने भएको छ । दमक जेसिजको अगुवाईमा दमक वडा नम्बर ८ स्थित बालुवाटारमा तालिमहल निर्माण हुने भएको हो । दमक नगरपालीकाले तालिमहल निर्माणकोलागी जग्गा उपलब्ध गराएपछि हल निर्माण कार्य सुरु भएको छ । दमक पुर्वको रतुवा खोला पट्टि मुख्य राजमार्ग बाट करिब ७ सय मिटर दक्षिणमा रहेको ३ कठ्ठा जमिनमा अहिले ...
दमक वडा नम्बर ६ मा निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सम्पन्न
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/असार ३१/ दमक नगरपालीका वडा नम्बर ६ मा आज बिभिन्न रोगहरुको निशुल्क परिक्षण गर्नुका साथै औषधि समेत बितरण गरिएको छ । वडा कार्यालयमा आँखा, दाँत तथा फिजिसियन सम्बन्धि रोगहरुको निशुल्क परिक्षण गर्नुका साथै बिरामीहरुलाई औषधि समेत बितरण गरिएको वडाध्यक्ष टेकबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य शिबिरमा पाथिभरा आँखा अस्पताल दमक र मेचि आँखा अस्पताल बिर्तामोडका चिकित्सकहरुले आँखा जाँच ...
दमक मालपोतमा अनलाईन सेवा सुरु
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/असार ३१/ दमकमा रहेको मालपोत कार्यालयले सेवाग्राहीहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर आजबाट अनलाईन सेवा विस्तार गरेको छ । कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सो अनलाईन सेवाको शुभारम्भ गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सो सेवाको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारी, गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार शाह र कमल गाउँपालिकाकी प्रमुख मेनुका काफलेले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो । जिल्लाको माईपश्चिमका पाँच वटा ...
खबरदार, होसियार भानुभक्त आचार्य —————- जस्को नामै सिंहदरबार । हिंश्रक, भयानक, अजंघको सिंहले आक्रमण नगरोस् भन्ने भए सिंहलाई नजिस्काउनुस् । सिंहदरबारभित्र नजानुस् । कार्टुनहरु नबनाउनुस् । प्रतिकुल लेख, टिप्पणी नलेख्नुस् विरोधी सम्पादकीय नछाप्नुस् । मार्सी र माफियासँग नजोड्नुस् । ———– अहिले सिंह सुकलामा छ, उसलाई कमजोर नठान्नुस् । तागतलाई नजरअन्दाज नगर्नुस् । अनसन बसेर अप्ठेरो नपार्नुस् । सिंहदरबार छिरेर नखल्बल्याउनुस् ...
सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाब अत्यधिक बढेपछि २९ वटा ढोका खोलीए
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/असार ३१/ पहाडी जिल्लामा लगातार परेको अविरल वर्षाका कारणसप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव अत्यधिक बढेको छ । नदीमा पानीको बहाब बढेपछि ब्यारेजका ५२ वटा ढोकामध्ये २९ वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ । पछिल्लो मापनअनुसार कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव दुई लाख १५ हजार ९७० क्युसेक प्रतिसेकेण्ड पुगेको छ । पानीको बहाब अत्यधिक बढेपछि ब्यारेजका २९ वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ ...
प्रधानमन्त्री केपी ‘काका’ लार्इ भतिजको चिट्‍ठी
काकालाई भतिजको पत्र प्रिय ओली काका, प्रणाम । बालुवाटारमा पनि उत्तिसारो आनन्द छैन होला । तैपनि, बढ्दो उमेर र प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजुत पनि तपाइँले जे गरिरहनु भएको छ, त्यो धरै कमले मात्रै गर्न सक्छन् । तर, चिकित्सा विधेयकको सम्बन्धमा तपाइँका आसेपासेहरुले वास्तविक जनमतलाई नजरअन्दाज गरेर तपाइँलाई वैचारिक रुपमा बन्धक बनाए कि भन्ने शंका लागेर यो पत्र लेख्दैछु । काकालाई व्यक्तिगत ...